I-Quadberry ye-quad enikwe amandla kwi-NAS ene-Radxa SATA HAT - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaI-Quadberry ye-quad enikwe amandla kwi-NAS ene-Radxa SATA HAT
DAT / HAD SATA HAT
I-Dual / Quad SATA HAT yenzelwe i-Raspberry Pi 4 kunye ne-ROCK Pi 4, kwaye iPenta SATA HAT yenzelwe ROCK pi 4 kuphela.
I-Dual / Quad SATA HAT isebenzisa iibhasi ze-USB3 kwiRaspberry Pi 4 okanye kwi-ROCK Pi 4, inezi zinto zilandelayo:
Ukuya kwi-4x HDD / SSD ,xhasa i-2.5inch okanye i-3.5inch SSD
Sebenzisa iibhasi ezimbini ezizimeleyo ze-USB3 kwiRaspberry Pi 4
Uhlobo lwe-C lwamandla okufaka kunye ne-USB PD / QC inkxaso kuzo zombini i-2,5inch SSD kunye neRaspberry Pi 4
Inkxaso yangaphandle ye-ATX yokubonelela ngenkxaso ye-3.5inch HDD
I-fan kunye ne-heatsink yokupholisa i-Raspberry Pi 4 CPU
Inkxaso yokumiswa kwemodi ye-HDD
Isoftware yenkxaso ye-RAID 0/1/5
Inketho ye-PWM yokulawula inketho yokuhambisa ubushushu kwi-HDD
Umboniso okhethiweyo we-OLED kwidilesi ye-IP / Ugcino lolwazi
Kwi-HDD ye-intshi eyi-3.5, kufuneka i-ATX PSU esemgangathweni yamandla kwi-HDD kunye ne-Raspberry PI ngokwayo. Ngama-4Dinin HDDs, i-PSU kufuneka ibeyi-60W okanye ngaphezulu.
Kwii-HDD ze-intshi ezi-2,5, unokusebenzisa nje i-adaptha yamandla e-USB PD / QC (i-adaptha yamandla eyi-30W yanele) ukunika amandla HDD / SSD kunye neRaspberry Pi 4 ngokwayo.
I-Quad SATA HAT isebenzisa amandla amabini aphezulu i-JMS561 (i-JMS561 enye ye-Dual SATA HAT) enika ukuya kuthi ga kwi-400MB / s ukusebenza / ukubhala ngokubhala kwiidiski ezine kwimodi yeRAID0.
I-penta SATA HAT isebenzisa i-M.2 / PCIe kwi-ROCK pi 4 ukwandisa ukuya kuthi ga kumazibuko angama-5x e-SATA, isebenza kuphela kwi-ROCK Pi 4. Sihlengahlengisa ii-SATA ezine zangaphakathi kunye noyilo olunye lwe-eSATA olwenza unxibelelwano lube lula xa umsebenzisi efuna Sebenzisa iidiski zangaphandle.
Ukuya kwi-5x HDD / SSD ,xhasa i-2.5inch okanye i-3.5inch SSD, ukuya kufikelela ku-100T ukuGcina
I-4x SATA + 1x eSATA ngamandla
Sebenzisa iindlela ezimbini ze-PCIe 2.1 iibhasi kwi-ROCK Pi 4
Uhlobo lwe-C lokufaka umbane ngenkxaso ye-USB PD kuzo zombini ii-2.5inch SSD kunye ne-ROCK Pi 4
Umboniso okhethiweyo we-OLED wolwazi lwe-IP / Ugcino
Ukuze usebenzise ngokupheleleyo i-5 SATA, sisebenzise isinxibelelanisi se-eSATA, enokukhutshwa ngaphandle kwetyala. I-eSATA ibonelela ngedatha kunye namandla ngentambo enye, inokuqhuba ngokuthe ngqo kwi-HDD ye-intshi ye-3.5.
I-Penta SATA HAT ixhotyiswe yi-JMB585 ineendlela ezi-2 zee-PCIeebhasi ezifikelela kwi-10Gbps bandwidth. Nge-5 SSD eqhotyoshelweyo kwimo yeRAID0, singafezekisa ukuya kuthi ga I-803MB / s isantya.
Ibhodi ephezulu ye-SATA HAT
Ukujonga ii-HDDs kunye nokubonisa ulwazi olusisiseko lwee-HDDs, siye saqulunqa iBhodi ephezulu, enikezela ngolawulo lwabalandeli, ulwazi lwedilesi ye-IP kunye neqhosha lokuCima amandla okanye imisebenzi yabathengi. Intambo eguqukayo iqhagamshela ukusuka kwi-SATA HAT ukuya kwibhodi ephezulu.
Sibonelele ngepakeji yeDebian yolawulo lwe-SATA HAT nokubek'esweni. Abasebenzisi be-raspibhi Pi 4 okanye ROCK Pi 4 banokufaka iphakheji ngomgca omnye wokulandela:
Ukwenza ubomi bube lula kwaye bubonakale ngcono, siyile ityesi epheleleyo ye-SATA HAT eneRaspberry Pi, enokubamba ukuya kuthi ga kwi-2,5 intshi HDD kunye nebhodi ephezulu.